Agafee obodo 2 n’afọ abụọ n’ime mkpọchi okporo ụzọ Bursa | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaBursa bu ụzọ obodo 2 n'ime afọ abụọ nke ọgba aghara
Bursa bu ụzọ obodo 2 n'ime afọ abụọ nke ọgba aghara
14 / 02 / 2020 16 Bursa, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Bursa nọ na ọdụ ụgbọ okporoko n'obodo ahụ kwa afọ
Ngwa ndị nwere ọgụgụ isi na njikọta ụzọ na ọnụnọ na-enwu n'okporo ụzọ nke Bursa Metropolitan rụpụtara gosipụtara na data mba ụwa, nke belatara mkpọchi okporo ụzọ. Bursa, nke bụ obodo 2018th kacha chịa na 160, bụ ọkwa 2019th na 208 na nyocha nke ụlọ ọrụ Netherlands na-akwadebe ngwongwo okporo ụzọ n'ụwa niile.
Netherlands Companylọ ọrụ nka na uzu igwe nsoro na TomTom Ekwuputala data 2019 nke TomTom Traffic Index, nke o mepụtara iji nyere obodo niile dị na ụwa aka ịlụ ọgụ siri ike ịmegharị agagharị. Ọkwọ ụgbọala, obodo nhazi, ụgbọ ala na-emepụta na atumatu ọnụ ọgụgụ na ozi banyere mgbochi okporo ụzọ na 6 mba 57-otite on 416 kọntinent àjà nnyocha e nyere 10 obodo si Turkey. Ọ bụ ezie na obodo ahụ nwere nnukwu mkpọmkpọ ebe bụ Bengaluru si India, Manila si Philippines na Bogota si Colombia bụ obodo nke atọ ọgbakọ kachasị gbakọ. Istanbul, ebe a na-ekpebi mkpọchi okporo ụzọ dị ka pasent 2019 na 55, ghọrọ obodo nke itoolu nke mkpọsa obodo India gasịrị.
Belatara usoro 2 n'ime afọ abụọ
Ankara, ebe mkpọchi okporo ụzọ dị ka pasentị iri atọ na anọ, kwụrụ 32th na listi, ebe İzmir 100, Antalya 134 na Adana bụ 144th. N'ime obodo ndị Turkey tinyere aka na nyocha ahụ, Bursa ghọrọ otu n'ime obodo ebe enyere enyemaka okporo ụzọ. Na-abanye na data 180 nke TomTom Traffic Index dị ka obodo 2017th kasị gbakọọ, Bursa bụ ọkwa 67th, na-ahapụrụ obodo 5 n'azụ na ndepụta nke afọ 2018 na enyemaka enyemaka 93 pasent na okporo ụzọ. Mkpokọta okporo ụzọ Bursa na 160 nyekwara enyemaka 2019 pasent karịa ka afọ gara aga, wee daa na 1th na obodo ụwa. N’ihi ya, Bursa hapụrụ obodo 208 n’afọ abụọ gara aga wee bụrụ otu n’ime obodo na -ebelata okporo ụzọ kwa ụbọchị.
11 August ụbọchị kacha mma
Dika onu ogugu enwere ugbua nke 2019, Bursa nwere ubochi izu ike nke oma na Sunday, August 11. Enyochala mkpọtụ kacha ala n'okporo ụzọ taa dịka pasent 10. Thebọchị kachasị njọ nke 2019 gosipụtara na ọnụ ọgụgụ dị ka Mọnde, Disemba 30. Mgbakọ kachasị elu taa ruru pasent 49. Achọtara data okporo ụzọ nke mere n'ụtụtụ ụbọchị izu na nke mgbede, n'ọmụmụ ihe ahụ. N'ihi ya, ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ụtụtụ bụ pasent 32, ọnụ ọgụgụ kasị elu nke mgbede bụ pasent 55. Dabere na data ndị a, ndị bi na Bursa jiri nkeji 30 ọzọ maka njem nkeji iri atọ n'ụtụtụ na mgbakwunye 10 nkeji mgbede.
Nke a bụ mmalite
N'ịtụle data ndekọ okporo ụzọ ekwuputala, Bursa Metropolitan Municipality Mayor Alinur Aktaş kwuru, “Bursa bụ nke a họọrọ 416th n'etiti obodo ndị kachasị mkpọsa na 2019 na nyocha nke ụlọ ọrụ teknụzụ ndị na-ahụ maka ụzọ na Netherlands nke kwadebere ọnụ ọgụgụ mkpọchi okporo ụzọ maka obodo 208 n'ụwa niile. Anyị depụtara 2018th na data 160 nke otu ụlọ ọrụ na 2017th na data 67. Nke a pụtara: Dị ka Bursa, anyị ahapụla obodo 2017 n'ofe ụwa ebe ọ bụ na 141 wee kpuchie ebe dị anya n'ihe banyere enyemaka enyemaka. Ọ bụ ihe na-enye afọ ojuju ka anyị ịtụgharị enyemaka ahụ na okporo ụzọ Bursa na data mba ụwa. Ihe kacha anyị mkpa bụ ibu njem na Bursa. Anyị lekwasịrị anya na ngwa nghazi ndị amamihe na ọrụ mmeba ụzọ. Ọbụna ọmụmụ ndị a mere ka enwere nnwere onwe dị ukwuu n'okporo ụzọ. Agbanyeghị, ọmụmụ ihe ndị a bụ mmalite. Anyị ga-ahụ na mkpọchi okporo ụzọ ga-ebelata ọbụna karịa n'okporo ụzọ mmiri, usoro ụzọ ụgbọ oloko ọhụrụ, ịgbatị usoro ụgbọ ala dị ugbu a na mpaghara ụfọdụ, njikarịcha usoro okporo ụzọ. Na mgbakwunye, na ebe a na - ahụ maka ihe banyere okporo ụzọ na sistemụ elektrọnik igwe anyị ga - eme, a ga - egbochi ogige na - ezighi ezi, a ga - ebelata ọsọ na mmebi ọkụ. N'ihi ya, ụzọ okporo ụzọ ga-agba ọsọ karịa. ”
7 / 24 nkwekọrịta okporo ụzọ IMM
Enwere ike ịmepụta ụgbọ okporo ígwè iji gbochie mberede okporo ụzọ?
Ntuziaka na-egbuke egbuke maka Mgbochi okporo ụzọ na Izmir
Ebe Ntanetị 141 nke Istanbul na Ntinye na kilomita
141 na-acha n'okporo ámá mbụ nke ụwa. Na-agba Afọ
Ụzọ ntinye ụgbọ mmiri mbụ nke ụwa na-eji 141 Age eme ihe
Ejiri Ugbo 141 350 Ugbo eji emeghari ya
IMM na-arụ ọrụ iji kwụsị njigide okporo ụzọ na ụgbọ oloko
Ọkachamara Ski Resort Tıklım Tıklım
Erciyes Ski Center pịa
Tıklım Tıklım Nke kachasị ebe a na-eme ski Center na Erciyes
A na-efezi ihe ndị e ji emepụta ihe ma nke asaa n'ime mmasị ndị njem
Manisa Old Garage Open Market
CHP Gürer: "A gaghị egbochi ohi na ọrụ TCDD"
Ngwa ngwa ntinye aka Bursa
Obodo ukwu nke Bursa
okporo ụzọ bursa
Teknụzụ nke ịnya ụgbọ elu
Ndepụta okporo ụzọ TomTom
Konya Metro, Konyaray, Ring Road na Logistics Center na Mmemme Investment na 2020